Dani Alves oo afka ciida u daray Monaco iyo Juventus oo iska xaadirisay Finalka – Radio Jowhar
Dani Alves oo afka ciida u daray Monaco iyo Juventus oo iska xaadirisay Finalka
Mohajuba Radio jowhar:
Kooxda Kubada cagta ahe Juventus ayaa iska xaadirisay finalka Champions Leaque-ga kadib markii ay guul ka gaadhay AS Monaco oo Juvuntus Stadium marti ugu ahayd. Kooxda Maxi Allegri ayaa tikidhka u goosatay magaalada Cardiff ee dalka Wales kadib markii ay wadar ahaan labadii kulan ee afar dhamaadka ay AS Monaco ku garaacday 4:1.
Mario Mandžukić iyo Dani Alves ayaa Juventus guushan ku hogaamiyay halka da’yarka kooxda Monaco ee Kylian Mbappé uu kulankan ka dhigay taarikh isaga u khaas ah kadib markii uu dhaliyay goolka ay Monaco shabaqa Buffon ku gaadhay 180 kii daqiiqo wuxuuna noqoday da’yarkii abid ugu horeeyay ee afar dhamaadka Champions Leaque-ga gool ka dhaliyay isaga oo ay da’diisu tahay 18 sano iyo 140 maalmood.
Kaydka:Neto, Lichtsteiner, Benatia, Asamoah, Marchisio, Rincon, Cuadrado
Kaydka:De Sanctis, Fabinho, Mendy, Diallo, Lemar, Germain, Carrillo
Juventus ayaa kulankan ciyaaraysay iyada oo ahayd kooxda ugu cad cad ee finalka Champons Leaque-ga laga filayay in ay u soo baxayso maadaama oo ay 2:0 Monaco ku soo garaacday kulankii lugtii hore ee afar dhamaadka Champions Leaque-ga. Laakiin Allegri ayaa doonayay in ay kooxdiisu isdhigan oo ay shaqadii adkayd halkeeda ka sii wadato.
Daqiiqadii 10 aad Juventus ayay qasab ku noqotay in ay shaxdeeda xili horeba isbadal ku samayso kadib markii uu dhawaac muruqa ahi soo gaadhay Sami Khedira oo kulankii horena ganaax ku seegay. Xidiga ree Germany ayaa daqiiqadii 10 aad ciyaarta iskaga baxay waxaana lagu soo badalay Claudio Marchisio.
Juventus ayaa markiiba goolhayaha Monaco ee Subasic ku abuurtay masquul iyada oo fursado badan ku raadinaysya goolka furitaanka si ay Monaco niyada soo laabasho uga xumayso.Higuain iyo Dybala ayaana bilawgii ciyaarta dhibaato ku abuuray difaaca iyo goolhayaha Monaco.
DAQIIQADII 33 AAD Juventus ayaa heshay goolkeeda furitaanka ee ay xaalada ugu sii xumaysay AS Monaco waxaana goolkan dhaliyay Mario Mandžukić oo kulamadii ugu danbeeyay ka qatanaa in uu shabaqa soo taabto kulamada Champions Leaque-ga waxaana si wada jir ah kubbada uga soo shaqeeyay Sandro, Dybala iyo Alves waxayna ciyaartu noqotay 1:0 ay Juventus hogaanka ciyaarta ku qabtay.
Laakiin Juventus ayaa kalsooni buuxda heshay daqiiqadii 44 aad ee dhamaadkii qaybtii hore ee ciyaarta kadib markii uu Daniel Alves uu Monaco ku niyadjabiyay goolka labaad isaga oo kooxda ree France sabab ugu noqday in ay ka quusato hamigii ay ku doonaysay in ay ciyaarta ku soo laabto waxaana lagu kala nastay 2:0 ay Juventus hogaanka ku haysay taas oo la micno ahayd in wadarta labada kulan ay Old Lady hogaanka ku haysay 4:0.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay wali Monaco raadinaysay qaabkii ay shabaqa Juventus ku gaadhi lahayd balse Allegri ayaa markan shaxdiisa isbadal ku sameeyay wuxuuna ciyaarta ka saaray da’yarka Paulo Dybala si uu fursad u siiyo Juan Cuadrado oo kaydka fadhiyay halka Monaco uu ciyaarta ka baxay Benjamin Mendy waxaana kaydka ka soo baxay Fabinho.
DAQIIQADII 67 aad Da’yarka Mbappe ayaa ugu dhawaaday in uu jabiyo rekoodhka gool iska ilaalintii Juventus isaga oo helay fursad uu gool ku dhalin karayay balse goolhaye Buffon ayaa wiilka uu awowga u noqon karo fursadan ka beeniyay.
DAQIIQADII 69 AAD Kylian Mbappé ayaa markan Buffon u sheegay in aanu celin karin goolkan wuxuuna Monaco u dhaliyay goolkeedii ugu horeeyay ee ay labada kulan kaga soo dhalisay Old Lady kadib markii uu caawin ka helay Moutinho, wuxuuna goolka Kylian Mbappé soo gabagabeeyay kulamadii badnaa ee ay Juventus garoonka kala soo baxday shabaqa nadiifta ah waxayna ciyaartu noqotay 2:1 ay wali Juventus hogaanka ciyaarta ku hayso.
TAARIIKH: Markale Mbappe ayaa taariikh cusub ka dhigay Champions Leaque-ga wuxuuna noqoday ciyaartoygii abid ugu da’da yaraa ee afar dhamaadka Champions Leaque-ga gool ka dhaliyay. Wuxuuna taariikhdan dhigay isaga oo jira 18 sano & 140 maalmood. Waxa uu dhaliyay goolkiisii 6 aad ee Champions Leaque-ga wuxuuna ka goolal batay inta ugu badan xidigaha kubbada cagta wax isku mooda.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2:1 ay markale Juventus ku garaacday Monaco waxayna kooxda Allegri tikidhka u goosatay magaalada Cardiff ee dalka Wales oo lagu qaban doono finalka Champions Leaque-ga. Real Madrid iyo Ateltico Madrid ayaa habeen danbe soo kala bixi doona iyada oo midkood Juventus balan kaga samaysan doonta Cardiff balse haddba Real Madrid ayaa 3:0 kulankii hore ku soo guulaystay.
By:Mohamed Abdi Husein Juba